I-BankBot ifunyenwe kwimidlalo yamakhadi kunye nokusetyenziswa kweetotshi | I-Androidsis
I-BankBot: iTrojan ebiba idatha yebhanki efunyenwe kwii -apples ze-flashlight
UEder Ferreño | | Khu seleko
Iinyanga zokugqibela, Igama leBankBot likhankanyiwe kwimidiya emininzi. Kwabo bangayaziyo, kunjalo I-Trojan eneenjongo zokuba iinkcukacha zebhanki zomsebenzisi. Ngale ndlela ndinokufikelela kwiakhawunti yakho. Ke, yenza imisebenzi engekho mthethweni ngaphandle kwemvume yomthengi. Kuzo zonke ezi nyanga kuye kwafunyanwa kwizicelo ezahlukeneyo.
I-AVAST ngoku yenza ingxelo apho kuye kwafunyanwa into entsha kwiBankBot kwizicelo ezahlukeneyo kuGoogle Play. Le iTrojan ifumene indlela yayo kwizicelo zethotshi. Nangona ikwimidlalo yamakhadi efana neSolitaire. Ukwazile ukugqitha kwitshekhi yokhuseleko?
Le bot yile ngena kwizicelo nje ukuba sivule usetyenziso lwebhanki yethu. Ayisiyo isicelo esisosulelekileyo, kubalulekile ukwazi oku. Xa sivule isicelo sebhanki, sifumana ujongano olufanayo nolwesicelo esichaziweyo. Isicela ukuba ufake iinkcukacha zethu zebhanki. Kodwa, enyanisweni yiKapa ekhoyo kuyo ukuqokelela idatha yethu.
Inani leebhanki ezichaphazelekayo liyanda ngokuhamba kweeyure. ICitibank, Chase kunye ne Wells Fargo babengabokuqala ukuqinisekiswa. Nangona abanye bathanda UDiBa bakwanabo bachaphazelekayo. Iibhanki ezichaphazela abasebenzisi kumazwe anje Jemani, Netherlands, United States, Australia okanye Spain. Ke sithetha ngamanani amakhulu.
Ingxelo ye-AVAST ichaza oko I-BankBot ichaphazela ikakhulu ukusetyenziswa kweethotshi, Imidlalo yamakhadi kunye nokusetyenziswa kwezicelo ze-Android. Imidlalo efana I-Classic Solitaire o Spider Solitaire bosulelwe yile Trojan. Ukongeza kwiifleshlight zokusebenza ezinje ITornado Flashlight o Yiba kukukhanya.
Ukusuka kwi-AVAST, ezinye iingcebiso zinikezelwa kubasebenzisi ukuba bazikhusele kwesi sisongelo. Into yokuqala yile Qiniseka ukuba isicelo sebhanki siyintsusa kwaye isebenza kakuhle. Sebenzisa ukungqinisisa okuphindiweyo kwisicelo sakho sebhanki, kangangoko kunokwenzeka. Kwakhona, xa ukhuphela usetyenziso kuGoogle Play, zama ukubenza kuphela Iinkqubo zokusebenza eziqinisekisiweyo zikaGoogle. Ukuba sikrokrela ukuba usetyenziso okanye umdlalo esiwukhupheleyo unokuba nale Trojan, kungcono ukuyicima kwangoko.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Khu seleko » I-BankBot: iTrojan ebiba idatha yebhanki efunyenwe kwii -apples ze-flashlight
Inqaku elihle! Enkosi kakhulu ngokwabelana ngayo. Ndiyabulisa !!!
Ukuwela kwezilwanyana: Inkampu yePokotho ngoku iyafumaneka kwiVenkile yeGoogle Play
Uluhlu lwe-Samsung J lwe-Samsung luya kwamkela iikhamera ezimbini zangasemva ze-2018